Uxolo Microsoft, ngicabanga ukuthi ngizwa iphunga! | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Agasti 18, 2006 NgoLwesihlanu, Okthoba 26, 2018 Douglas Karr
Lapho ngiqala ukusebenza ngeposi ngqo ephephandabeni, isu lethu lalilula futhi lisebenza kahle kakhulu. Singabaqinisa abakhangisi bethu ekusebenziseni uhlelo lwethu lweposi oluqondile ngokunikeza izaphulelo kumazinga abo wokukhangisa jikelele. Sasinohlelo lweposi oluqondile lwekhwalithi, kepha amanani ethu ayephezulu kakhulu ngokuqhathaniswa nanoma imuphi umncintiswano. Icebo lelo libe yimpumelelo enkulu futhi sihlala njalo sisusa ibhizinisi emncintiswaneni wethu… yize abakhangisi bakhokha kakhulu.
Ngaphakathi, lokhu bekuyisu nje lokubuyekeza okusenze sehluka emncintiswaneni wethu. Okusihlukanisile ukuthi besivele sinobudlelwano nalaba bakhangisi, besivele sidinga ukukusebenzisa. Nginesiqiniseko sokuthi ngaphandle kubuka ngaphakathi, abantu bacabanga ukuthi besikhohlakele. Kodwa kwakuyibhizinisi. Angizange ngiphatheke kabi ngakho ngoba ngicabanga ukuthi izinzuzo zohlelo lwethu zazizidlula kude noma yiziphi izinhlelo esincintisana nazo. Senze ukuhlaziywa kwamahhala, sagcina imininingwane yolwazi emnandi, saphatha uhlu lwabo lwe-Do Not Mail, njll. Kwakuyimpumelelo.
I-Reaction beta blog inolwazi oluthile maqondana neMicrosoft Internet Explorer 7 kanye nemiphumela yokuhlolwa kokuhambisana nayo namazinga weCSS (Cascading Style Sheet). Imiphumela iyesabeka. IMicrosoft kungenzeka ukuthi ibuyele emuva maqondana namazinga we-inthanethi, hhayi phambili. Lokhu kungahle kungabi yinto enkulu kubasebenzisi, kepha yisimo esibi ezinkampanini zentuthuko. Uma igebe likhula ekutheni iziphequluli ziwaphatha kanjani amazinga, izindleko zalokho ziyaphoqelelwa ezinkampanini ezisabalalisa izinhlelo zokusebenza zewebhu. Kumele basekele amapulatifomu azimele anekhodi eyinkimbinkimbi, futhi mhlawumbe nohlu lwezici ezisuselwa ohlelweni ngalunye. Ugh. Imijikelezo emide yokuthuthuka, izimbungulu eziningi, izikhalazo eziningi, njll., Njll.
Ngakho… ukube ubuyiMicrosoft bese kwenzeka umubi, bekungaba yini isu lakho uma ufuna ukukhipha umkhiqizo osezingeni eliphansi? Mhlawumbe ubuyoyisabalalisa noma kunjalo. Kuthiwani uma abantu bengayifuni? Hhayi-ke manje njengoba unawo wonke umuntu osebenzisa i-Automatic Updates, mane ukhethe ukuthuthukela ku-Internet Explorer 7 njengo okubalulekile buyekeza. Kuxazululwe inkinga… ukwamukelwa okungahlangene kokuzikhethela komkhiqizo osezingeni eliphansi ngamandla anonya.
Into embi ukuthi ngingumlandeli weMicrosoft, angisiye IMicrosoft yimbi umfana. Kepha ngicabanga ukuthi ngizwa iphunga legundane. Umbono wami ngeMicrosoft kungenzeka ushintsha maduzane.
Landa iFirefox, bakithi. Lokhu kuzoba yimpi.
Tags: i-internet explorerukutholwa ngobuningi-Microsoft
Ukuletha iBlog yakho ku- “A-List”